Archive du 20181010
Marc Ravalomanana « Tsy maintsy avotako ny fireneko »
Olon’ny Finoana i Marc Ravalomanana, ary efa namerimberina fa ankininy amin’Andriamanitra ny zava-drehetra ; anisan’ireo kandida miatrika ny JMJ an’ny tanora Katolika any Mahajanga ny tenany nanomboka omaly.
Kandida 22 mamondron-kery Hanohana kandida tokana ?
Mitohy ny famondronan-kerin’ireo kandida tsy mankasitraka ny fikarakarana ny fifidianana. Milaza ho mahita lesoka hatrany mantsy izy ireo, toy ny resaka lisi-pifidianana izay efa nanomezany 24 ora ny CENI ny hanokafana azy.
Dinam-pitondrantenan’ireo kandida Hisy tatitra atao isan-kerinandro
Tafakatra 12 ny isan’ireo kandidà nanaiky hanasonia ilay dinam-pitondrantena eo amin’ny samy kandidà mandritra ny fampielezan-kevitra nisy kandida iray tonga nanasonia saingy efa tara ny fe-potoana napetraka.
Fifidianana milamina Tompon’andraikitra ihany koa ny olom-pirenena
Amin’izao vaninandron’ny fifidianana, indrindra fampielezan-kevitra mamaivay izao, entanina ny mpiara-belona rehetra hifanaja.
Raha fifidianana milamina sy manaraka ny fenitra demokratika rehetra, tsy feno ny fepetra.
Fampielezan-kevitra Ahiana hiakatra hatrany ny maripana politika
Miditra amin’ ny andro fahatelo ny fampielezan-kevitra ho an’ny fifidianana filoham-pirenena hatao ny 7 novambra ho avy izao. Hatreto, ireo kandidà vaventy ihany no nisongadina. Hita taratra izany tamin’ny famoriam-bahoaka, filaharambe…
Paul Pody “Zava-doza no ao anaty IEM !”
Fifidianana filoham-pirenena Mamofompofona korontana
Tsy azo lavina fa be loatra ny isan’ireo kandida ho filoham-pirenena tamin’ity indray mitoraka ity. Nanomboka tany amin’ny taona 1982 ka hatramin’ny 2007 dia nanodidina ny dimy aman’enina teo hatrany ireo kandida.
Nampahafantarina ny alatsinainy 8 oktobra tetsy amin’ny Bistrot Antsahavola ny boky mirakitra ireo fehin-kevitra tapaka tao anatin’ilay loabary an-dasy nijeren-dry
Zava-doza mifono misitery Noloarana ny voamason’ilay ramatoa
Misy mpagalatra voamaso any amin’ny faritra Atsimon’ny Nosy amin’izao raha ny vaovao mandeha. Vehivavy lehibe iray 60 taona no tsy nisy voamaso roa intsony rehefa avy naka kitay tany amin’ny fokontanin’Antseva, Toliara ny faran’ny herinandro teo.
Kaominina Antananarivo renivohitra Nahazo fitaovam-panadiovana avy amin’ny firenena sinoa
Matotra ny fiaraha-miasa eo amin’ny masoivohon’ny firenea sinoa eto Madagasikara sy ny kaominina Antananarivo Renivohitra. Tonga nanolotra kojakoja fanadiovana ny tanàna mitentina 25 tapitrisa Ar ho
Rotsak’orana vao manomboka Betsaka sahady ireo sahirana
Betsaka sahady ireo olona sahirana eto an-drenivohitra taorian’ny nilatsahan’ny orana ny alatsinainy teo.
Mahajanga Fatina tovovavy iray natsingevan’ny rano
Tovovavy iray tokony ho 20 ka hatramin'ny 23 taona no maty an-dranomasina hita teo amin'ny moron-dranomasina mifanandrify amin'ny ENEM omaly tokony ho tamin’ny 4 ora hariva.
Makotroka any Mahajanga Raikitra ny JMJ Mada 2018
Nosantarina tamin’ny lamesa lehibe tao amin’ny Village Touristique ao Mahajanga ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny Fihaonamben’ny tanora andiany faha-9 na ny JMJ MADA 9 any amin’ny tanànan’ny Voninkazo.
Lova Ramisamanana ho filohan’ny FMF Barea hiatrika ny Mondial 2026 any Amerika no tanjona
Na dia tsy fantatra aza ny daty hanaovana ny fifidianana filohan’ny FMF “Federason’ny Baolina Kitra Malagasy”
Baolina kitra vehivavy sokajy U 16 Vita omaly tetsy Anosibe ny antsapaka
Vita omaly tetsy amin’ny Motel Anosibe ny antsapaka amin’ny Tournoi baolina kitra vehivavy sokajy U 16 hiarahan’ny FMF sy ny Unicef manantontosa eny amin’ny kianjan’i Carion ny 12-20 oktobra 2018 eny Carion hoenti-manamarika ny andro iraisam-pirenena hoan’ny ankizy vavy izay hankalazaina ny 8 oktobra isan-taona.
Antsika ny safidy e !
Mihazakazaka amin’ny fanaovana propagandy ny kandida vitsivitsy, ary manao izay faraheriny mihitsy, raha toa ka mbola mangingina ny sasany, ary iaraha-mahita ny mbola fisian’ireo miady varotra noho ny fahitany zavatra tsy milamina sy tsy mangarahara.
Kapsilinaka Kilalao mety hahazoana loka isan’andro
Kely sisa dia hikatona indray ny fotoam-pialantsasatra lehibe. Mba hahafahana mamalifaly ny isam-pianakaviana, indrindra fa ny ankizy tia misotro zava-pistro Fresh dia natomboka ny fiandohan’ny volana oktobra teo ilay lalao Kapsilinakà,
TEZITRA FA TSY NAHAZO VOLA
Nikorontana ny olona omaly tetsy Ankadindramamy rehefa tsy nahazo ny vola nampanantenain’ny kandidà iray.
Etsy amin’ny Fatapera Antaninarenina indray no hihaonan’i Olombelo Ricky amin’ireo mpankafy azy ny zoma izao. Nampitondrainy ny lohanteny hoe « Amorom-paria » moa ity seho takariva ity.
Herisetra ara-nofo Adolantsento 1 amin’ny 6 no hiharany eto amintsika
Tsy resahana ny herisetra ara-nofo mpahazo ny zaza sy ny ankizy fa raha ny mpahazo ireo adolantsento kosa, izany hoe manomboka eo amin’ny 13 ka hatramin’ny 19 taona dia raha misy 6 isa amin’izy ireo no miara-mivory dia matetika
Nampahafantarina tetsy amin’ny Hotely Telozoro Andrefan’Ambohijanahary omaly talata 09 oktobra ny hetsika meeting VW Mada Andiany faha-5 izay hatao ny sabotsy 13 oktobra ho avy izao manomboka amin’ny 08 ora sy sasany maraina etsy amin’ny lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina.